Filmography र जीवनी Artema Osipova
Artyom Osipov - रूसी अभिनेता, आफ्नो खेल गुप्तचर र melodramatic सिरियल फिलिम, तर, यसको रचनात्मकता धन्यवाद लागि जानिन्छ जो, सजिलै वर्ण को एक विस्तृत विविधता को तस्बिरहरू प्रयोग गर्न सक्छन्। आकर्षक उपस्थिति Artema Osipova पनि आफ्नो क्यारियर मा एक धेरै सकारात्मक प्रभाव, यो कारण, यो भूमिकाको कुनै पनि प्रशंसकहरूको न्यानो स्वागत प्राप्त गर्नेछ।
प्रारम्भिक जीवन र क्यारियर
Osipov Artem Alexandrovich, साराटोभ शहर मा जन्म भएको थियो। जन्म मिति - केटा नाटकीय जीवन आकर्षित बच्चैदेखि यस कारण लागि जनवरी 29, 1983, आफ्नो आमाबाबु उसलाई पठाएको एक नाटकीय सर्कल। स्कूलमा, Artyom Osipov को साराटोभ Conservatory मा अध्ययन र शिक्षकहरू राम्रो सर्तहरू थियो। यस समयमा जवान संगीतकार र अभिनेता को पेशों बीच छान्ने hesitated, तर conservatory देखि स्नातक पछि अझै पनि बाद मा केन्द्रित छ।
थप प्रशिक्षण Artema Osipova पहिलो प्रयास मा सबै परीक्षाहरू पारित, उहाँले सफलतापूर्वक गरे जहाँ मास्को कला थियेटर स्कूल, मा भयो। अध्ययन निर्देशन अन्तर्गत एक अभिनय कार्यशाला मा आयोजित Konstantin Raikin (दिग्गज र प्रतिभाशाली अभिनेता Arkadiya Raykina को छोरा)।
को मास्को कला थियेटर मा अध्ययन को दोस्रो वर्ष देखि पहिले नै, Osipov मञ्चमा प्रसिद्ध थिएटर "Satyricon" (जसको निर्देशक समयमा आफ्नो सल्लाहकार थियो) प्रदर्शन गर्न थाले। Shakespearean शोकमा "Macbeth" - एक debut प्रदर्शन Artem मञ्चमा आफ्नो पहिलो भूमिका प्रदर्शन जसमा। र स्नातक Osipova पछि आधिकारिक काम गर्न "Satyricon" निमन्त्रणा।
Artyom Osipov: "एक" बाट Filmography "Z" गर्न
फिल्म संसारमा Osipova पहिलो उपस्थिति 2005 मा लड्यो। अभिनेता सिरियल सिनेमाको प्रासंगिक प्रकृतिका भूमिका चढाइने "वकील-2", जो उहाँले तुरुन्तै सहमत गर्न।
र त्यसै वर्ष, अभिनेता चलचित्र मा अभिनय "प्रेम प्रेम हो।"
2007 मा, Aleksandra Osipova सिरियल फिलिमहरु जो पछि सार्वजनिक को मात्र होइन ठूलो पहिचान, तर फिलिम पुरस्कार को धेरै थियो "परिसमापन", मा खेल्न निमन्त्रणा गरिएको थियो। तर मिनी-श्रृंखला भाग "साशा, मेरो प्रेम!" पछि Artyom प्रसिद्धि को पहिलो स्वाद लाग्यो।
2008 देखि 2011 को, अभिनेता यस्तो गति तस्बिरमा तारा अङ्कित:
"अलेक्जेन्डर। Nevsky युद्ध ";
"प्रेम को एक रात";
"हृदय कसरी हुन";
यो समयमा, समानान्तर मा Osipov नाटकीय जीवन मा भाग। सँगै Raikin Butusov संग र त्यो प्ले "राजा Lear" को प्रत्येक भाग को एक अध्ययन मा काम गरिरहेको छ।
2011 मा, Osipov सिरियल फिल्म तारा अङ्कित "जीवन र साहसिक Mishka Jap को।" यो अन्य चलचित्रहरू र टेलिभिजन श्रृंखला मा शूटिंग पछि थियो:
"राष्ट्रको पिता को छोरा";
"सत्य गर्न दायाँ";
"ठेक्का-2 को स्थितिहरु";
"म सबै कुरा सम्झना";
"Londongrad। हाम्रो ठेगाना "!;
"राम्रो हुन सकेन";
"पहिलो देखि पछिल्लो गर्न";
"कुनै पनि मूल्यमा विवाह";
Artema Osipova संग एक साक्षात्कार मा आफ्नो मनपर्ने चलचित्रहरू सबैभन्दा भाग हाइलाइट गर्न आग्रह गरिएको थियो। अभिनेता निम्न तस्वीर भनिन्छ:
"प्रेम प्रेम छ";
टिभी श्रृंखला "हड्डी।"
तिनीहरूले बाँकी फरक कसरी सोध्दा Artem आफ्नो सिर्जना संलग्न भनेर जवाफ दिनुभयो ठूलो अभिनेता, त्यसैले उनीहरूसँग क्यामेरा काम हेर्दै ठूलो अनुभव थियो।
को थिएटर बाहिर एक अभिनेता जीवन
Artyom Osipov - अभिनेता व्यक्तिगत जीवन यसको रहस्य र पहेलियों छ जो। कुनै पनि इच्छुक अभिनेता रूपमा उहाँले व्यक्तिगत जीवनको लागि सानो समय थियो, र त यो लामो समय उहाँले प्रेम महिला थिएन लागि छ। Osipov धेरै यो चिन्तित, तर 2009 मा, Artyom तिनको प्रेम जसको नाम विज्ञापन गर्दैन, भेटिएन।
एक समय पछि जोडीलाई एक भद्र विवाह प्ले। हाल खुसी विवाह र तीन छोराहरू बस्ने, आफ्नो पत्नी संग Artem को अभिनय पेशा गर्न असम्बन्धित दुई कसको - मूल र वरिष्ठ - सौतेनि छोरा।
अभिनेता अलेक्जेन्डर Volkov: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन
Klint Istvud: Filmography, जीवनी। हलिउड अभिनेता
लियोनिद Yarmolnik - Filmography, जीवनी, व्यक्तिगत जीवन
"तल स्कुबा": अभिनेता, भूमिकाको, षड्यन्त्र, सारांश
"Patrol समय"। अभिनेता वर्तमान रक्षा
के खुशामदभरा र कसरी बनाउँछ?
"Eleutherococcus": स्वस्थ हुन कसरी निर्देशन
कसरी एक सुखद सवारी लागि स्किइङ टिप्न
कोरल Peony सूर्यास्त (कोरल सूर्यास्त)
नेट एउटा Trampoline कसरी छनौट गर्न
विस्तार टक्कर बन्द भयो
"मा खराब कम्पनी": एक सारांश। "खराब कम्पनी मा" - VG Korolenko को कथा
स्ट्रोक को उपचार मा मस्तिष्क परिसंचरण को सुधार को लागि तयारी